Vaovao - Fomba fanadinana valizy lolo sy paingotra
Ny fomba fitsapana ny valizy lolo sy ny fametrahana vahaolana
Fitsapana sy fanitsiana valizy lolo:
1. Ny valizy lolo dia singa iray manara-penitra, pneumatic, hydraulic ary elektrika izay efa nofoanana tanteraka alohan'ny nialany tao amin'ilay orinasa. Rehefa manamarina ny zava-bitan'ny famehezana izy, ny mpampiasa dia tokony manamboatra ny sisiny roa amin'ny fidirana sy ny fivoahana, manidy ny valizy lolo ary mametraka tsindry amin'ny sisiny miditra. Jereo raha misy fivoahana amin'ny sisin'ny fivoahana. Alohan'ny fitsapana ny tanjaky ny fantsona dia tokony hosokafana ny takelaka kapila hisorohana ny fahasimban'ny mpivady famehezana.
2. Na dia nandalo fanaraha-maso henjana sy fanandramana aza i Diyue talohan'ny nialàny ny orinasa, dia misy ihany koa ireo vokatra manova azy ireo ho azy mandritra ny fitaterana, mitaky fanitsiana, pneumatics, hydraulika, sns. .
3. Ny fanokafana sy ny famaranana ny kapoka an'ny mekanisma fanaraha-maso dia namboarina rehefa nandao ny ozinina ny valizy lolo mandeha amin'ny herinaratra. Mba hisorohana ny làlan-diso rehefa mandeha ny herinaratra dia alefan'ny mpampiasa amin'ny tanana amin'ny toerana misokatra misokatra hatrany ny mpampiasa rehefa avy namadika ny herinaratra izy avy eo, ary avy eo nanindry ny jiro elektrika hanamarina ny làlan'ny ny takelaka famantarana dia mifanaraka amin'ny tari-dalan'ny valizy.
2. lesoka mahazatra sy fomba fanafoanana valves lolo:
1. Alohan'ny hametrahana ny valizy lolo, hamafiso raha toa ka mifanaraka amin'ny toetoetran'ny fihetsiketsehana ny valin'ny lolo sy ny zana-tsipiky ny fivezivezena midadasika, ary tokony ampidirina sy diovina ny lavaka anatiny ao amin'ny valiny Guilong. Tsy azo atao ny manana raharaham-bahiny mifamatotra amin'ny peratra famehezana sy ny lovia lolo. Tsy azo atao ny manidy ny takelaka lolo mba tsy hanimba ny peratra famehezana.
2. Amporisihina hampiasa flange manokana ho an'ny valizy lolo, izany hoe ny valizy vy fantsom-bozaka karazana HGJ54-91 ho an'ny fametrahana ny takelaka kapila.
3. Ny toerana tsara indrindra hametrahana lolo valizy amin'ny fantsona dia ny fametrahana vertika, fa tsy ny fametrahana ambony ambany.
4. Ny fikorianan'ny valizy lolo dia mila ahitsy mandritra ny fampiasana azy, ary fehezin'ny kankana no mifehy azy.
5. Ho an'ny valizy kapila miaraka amina fotoana fanokafana sy fanidiana marobe, sokafy ny fonony boatina kankana afaka roa volana eo ho eo mba hahitana raha ara-dalàna ny dibera. Tehirizo dibera tsara.
6. Zahao ny fihenan'ny ampahany ampifandraisina, izay tsy hoe miantoka ny toetran'ny tantely toy ny fonosana, fa manome antoka koa ny fihodinan'ny vatan'ny valizy.
7. Ny vokatra valizy lolo vita amin'ny metaly dia tsy mety amin'ny fametrahana amin'ny faran'ny fantsona. Raha tsy maintsy apetraka amin'ny faran'ny fantsona izy dia tokony hapetraka ny flange outlet hisorohana ny peratra tombo-kase tsy ho voageja sy be loatra ny toerany.
8. Fametrahana vodiny sy fampiasana valiny Jereo matetika ny valin'ny fampiasana valves, ary esory avy hatrany izay lesoka hita.
3. Ny fomba fanafoanana ara-potoana ny mety tsy fahombiazana dia amin'ny antsipiriany eto amin'ity latabatra manaraka ity: Ny antony mety mahatonga ny fomba tsy fanafoanana ny famoahana ny famoahana ny rano eo amin'ny haben'ny feon-tany 1. Ny takelaka lolo sy ny faritra famehezana dia misy potipoti-javatra.
2. Ny toerana famaranana ny takelaka lolo sy ny famehezana dia tsy marina
3. Ny lafiny fivoahana dia miaraka amina bolt flange izay manindry henjana na tsy mifanaraka amin'ny takian'ny sary 1. Ny làlan'ny fitsapana tsindry dia tsy mifanaraka amin'ny takian'ny sary 1.
1. Esory ny loto ary diovy ny vava anatiny amin'ny valizy
2. Amboary ny visy fanitsiana ny fitaovana kankana na actuator elektrika mba hahatratrarana ny toerana fanidiana ny valizy. 3. Zahao ny fiaramanidina flange miakatra sy ny firenena manamafy orina. Tokony hohamafisina tsara izy ireo.
4. Tsindrio ny làlan'ny tombo-kasen'ilay tendrony
5. Fivoahana amin'ny tendrony roa amin'ny valizy:
1. Tsy mahomby ireo gazy famehezana amin'ny lafiny roa
2. Ny tsy fitoviana amin'ny flange fantsona tsy mitovy na tsy voafehy
3. Ny gaskets famehezana ambony sy ambany amin'ny peratra famehezana dia tsy mety. 1. Soloy ny gasket famehezana. 2. Hamafiso ny kofehy flange (hery mihitsy aza). 3. Esory ny peratra faneren'ny valizy ary soloo ny peratra famehezana. Ilay lasantsy tsy nahomby